Bartlett Lauds Bahia Principe ee Maamulaha Dalka Cusub ee Jamaican ee ugu Horreysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Bartlett Lauds Bahia Principe ee Maamulaha Dalka Cusub ee Jamaican ee ugu Horreysa
Wasiirka Dalxiiska Mudane. Edmund Bartlett waxa uu salaamayaa Bahia Principe maareeyaha cusub ee dalka Jamaica Brian Sang (midig), iyo waliba madaxa hawlgelinta Antonio Teijeiro. Munaasabadda ayaa ahayd booqasho sharafeed ay sameeyeen maamulka kooxda maamulka Bahia Principe ee xafiisyada Wasiirka New Kingston Janaayo 11, 2022. Lahaanshaha sawirka Jamaica Wasaaradda Dalxiiska
Hoteelka ugu weyn Jamaica, Bahia Principe, ayaa ku dhawaaqay magacaabista Brian Sang inuu noqdo maareeyaheedii ugu horreeyay ee Jamaican. Waxaa warkaas lagu soo dhaweeyay Wasiirka Dalxiiska Mudane. Edmund Bartlett oo xusay in ku dhawaaqista ay tahay mid ilaalinaysa hadafka Wasaaradiisa ee ah in jamacays badan ay ku yeeshaan door hogaamineed gudaha waaxda.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ogaado in Bahia ay u magacawday Jamaican inuu noqdo maareeyahooda cusub ee dalka. Tani waxay ka dhigan tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah sii wadida dhiirigelinta kheyraadka aadanaha ee aan ku horumarinaynay Wasaaradda Dalxiiska, si loo hubiyo in inta badan ee Jamaican ah ay ku jiri doonaan jagooyin hoggaamineed gudaha waaxda," ayuu yiri Bartlett.
"Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynayaa Mr. Sang waxaana u rajaynayaa shaqo guul, taasoo ka bilaabmaysa sannadkii 15-aad ee shirkadda Jamaica," ayuu raaciyay.
Wasiirka ayaa hadalkan jeediyay goor hore oo maanta ah, mar uu kullan ku yeeshay xafiiskiisa New Kingston. Intii lagu guda jiray wada-hadalladii uu la yeeshay madaxda hoteelka, wuxuu sidoo kale iftiimiyay shaqada muhiimka ah ee ay qabato Xarunta Dalxiiska Dalxiiska ee Jamaica (JCTI) si ay u tababarto shaqaalaha martigelinta si ay si wanaagsan u daboolaan baahiyaha qaybta, isagoo sidoo kale u qalma inay buuxiyaan kaalin hoggaamineed oo badan.
"Iyada oo ay qayb ka tahay sida ay nooga go'an tahay in aan dhisno caasimadda aadanaha ee Jamaica, waxaan sameynay cudud tababar oo lagu magacaabo JCTI, taas oo qabatay shaqo aad u wanaagsan oo awood u siineysa tababarka iyo shahaado-siinta xoogga shaqaalaha ee warshadaha soo dhaweynta," ayuu yiri Bartlett.
"Tani waxay muhiim u tahay kobaca iyo tartanka joogtada ah ee warshadeena dalxiiska."
JCTI waa qayb ka mid ah Sanduuqa Horumarinta Dalxiiska (TEF), oo ah hay'ad dadweyne oo ka tirsan Wasaaradda Dalxiiska. Tan iyo markii hindisuhu bilaabmay afar sano ka hor, in ka badan 8,000 Dalxiiska Jamaica shaqaaluhu waxay heleen shahaado xirfadeed. Tan waxa lagu suurtageliyay iskaashi istiraatijiyadeed oo lala yeesho Shaqaalaynta Aadanaha iyo Tababarka Kheyraadka/Wakaallada Tababarka Adeegga Qaranka (HEART/NSTA Trust), Sanduuqa Adeegga Caalamiga ah (USF), Ururka Makhaayadaha Qaranka (NRA), iyo AHLEI. Hadda, 45 musharrax ayaa isku diyaarinaya shahaadadooda fanka cunnada ee ay bixiso Xiriirka Cunnooyinka Mareykanka (ACF).
Kulanka waxaa ka soo qeyb galay mas’uuliyiin sare oo ka tirsan dalxiiska, iyo sidoo kale koox ka socotay Bahia Principe Resort, oo uu ka mid yahay madaxa hawlgelinta, Antonio Teijeiro; Agaasimaha Fulinta ee Horumarinta Hudheelka iyo Hal-abuurka, Marcus Christiansen; Maamulaha dalka ee xilka kasii dagaya, Adolfo Fernández; Agaasimaha Hay'adda Caalamiga ah iyo Mas'uuliyadda Bulsho ee Shirkadda, Fabian Brown; iyo Maareeyaha Dalka ee dhawaan loo magacaabay Brian Sang.
Sang waxa uu ku biiray Bahia ka dib xilliyo isxigxiga oo guul leh iyo waayihii xusida mudan ee hudheelka, dalxiiska, iyo warshadaha maaraynta soo dhawaynta. Doorkiisii ​​hogaamineed ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa Maamulaha Guud ee Kooxda ee Blue Diamond Resort ee St. Lucia.
Agaasimaha shaqada ka tagaya, Adolfo Fernandez, waxa uu la wareegay door cusub Spain ee kooxda dhexdeeda Janaayo 6-deedii, 2022.
Bahia Principe Hotels & Resorts waa qayb dalxiis oo ka mid ah Grupo Piñero oo bilaabay hawlihii 1995 iyada oo hudheelkeedii ugu horreeyay ku yaal Rio San Juan oo ku yaal xeebta woqooyi ee Jamhuuriyadda Dominican. Silsiladda hudheelka ee Grupo Piñero's Bahia Principe waxay sidoo kale leedahay hanti ku taal Riviera Maya ee Mexico iyo Spain ee Canaries iyo Balearic Islands.
DAAWO SAWIRKA: Wasiirka Dalxiiska Mudane. Edmund Bartlett waxa uu salaamayaa Bahia Principe maareeyaha cusub ee dalka Jamaica Brian Sang (midig), iyo waliba madaxa hawlgelinta Antonio Teijeiro. Munaasabadda ayaa ahayd booqasho sharafeed ay sameeyeen maamulka kooxda maamulka Bahia Principe ee xafiisyada Wasiirka New Kingston Janaayo 11, 2022. Lahaanshaha sawirka Jamaica Wasaaradda Dalxiiska